मोदी अभिनन्दनको विरोधमा तुक छैन : डा. भट्टराई «
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेता तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका नेपालतर्फका सदस्य डा. राजन भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जनकपुर र काठमाडौं दुई ठाउँमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कसैले विरोध गर्नुको तुक नभएको बताएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता भट्टराईले मोदी भ्रमणको सबै किसिमका तयारीहरू पूरा भैसकेको जनाए । उनले भने, “मोदीजीको भ्रमणको लागि सबै किसिमको तयारी पूरा भयो । भ्रमण पहिलाको जस्तो परम्परागत होइन, यो पटकको भ्रमण पृथक छ । त्यसैले भ्रमणलाई लिएर क्रिया तथा प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक हो ।”
उनले भ्रमणको विषयवस्तुको बारेमा कम छलफल तर आलंकारिक (कस्मेटिक) विषयमा बढी चर्चा भएको बताए । उनले मोदीको स्वागत र सम्मानको लागि जनकपुरमा नागरिक अभिन्दन राख्नु नौलो कुरा नभएको बताए । उनले थपे, “जनकपुर उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारले सम्मान राख्ने भनेपछि यसको किन विरोध गर्नु ? केन्द्र सरकारले अभिनन्दन गर्ने त परम्परा नै छ, यो चलन हो ।”
नेता भट्टराईले नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमणमा जाँदा पनि भव्य अभिनन्दन भएको स्मरण गराउँदै भने, “सन् २००९ मा माधव नेपाललाई दिल्लीमा भव्य नागरिक अभिनन्दन भएको हो । सन् २०१६ मा हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली भारत जाँदा गुजरातको हजमा र दिल्लीमा दुई ठाउँमा अभिनन्दन गरिएको थियो ।”